February 2017 – Radio KeyFM
Garissa : Knut oo Doonaysa soo xiritaanka Askar Weerartay Macalin
28th February 2017	Somali Language 0
Ururka midowga macalimiinta ayaa dalbanaya in lasoo xiro ilaa afar askari oo weeraray maamule iskuul iyo qof waardiye ah. Laanta ururka macalimiinta ee Garissa ayaa sheegtay in aan ilaa iyo hada waxba laga qaban dhacdadan. Xooghayaha Knut ee Garissa Abdirizak Hussein ayaa ku tilmaamay nasiib daro,maadaama aan waxba laga qaban …
Gubernatooraha Wajir Oo Eedeeyay Xildhibaanada Kasoo Horjeeda
Gubernatooraha Wajir Ahmed Abdullaahi ayaa ku eedeeyay kuwa isaga kasoo horjeeda in ay isku dayeen in ay sumcad xumeeyaan. Waxaa uu si gaar ah u dhaleeceeyay isku daygii ay sameeyeen xildhibaanka Tarbaj Mohamed Elmi iyo mudanaha kale ee laga soo doorto Eldas Adan Kaynan. Sharci dajiyayaashaasi ayaa gubernatooruhu sheegay in …
Nin Ku Eedeysan Haysashada Xashiis Oo Lasoo Taagay Maxkamada Mandera
Nin ku eedeysan in uu haystay xashiish ilaa 49 duub ah ayaa lasoo taagay maxkamada Mandera,iyada oo lagu sii daayay damaanad lacageed kadib markii garsoorku u ogolaaday. Damaanada lagu sii daayay ayaa gaaraysay Sh80,000 iyada oo Sh10,000 ay ahayd lacag cadaan ah (Cash ). Mr Abdullaahi Dela Salat ayaa diiday …
Gubernatoorayaal lagu samaynayo Baaritaan Musuq maasuq
Gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dalka ee magaciisana loo soo gaabiyo EACC ayaa shaciyay in ay bilaabeen baaritaano lagu sameeynaayo ilaa sideed gubernatoore oo kamid ah 47-da gubernatoore ee kowntiyada dalka. Waxaa ay ku lug yeesheen kuwa la baarayo wax isdaba marin iyo lunsasho hantida dadweynaha. Madaxa gudiga anshaxa …
Mucaaradka Oo Dhaliilay IEBC
Madaxa xisbiga mucaaradka ODM Raila Odinga ayaa dhaliilay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka u diyaar garowgooda ugu doorashada soo socoto ee la filayao in dalka ay ka qabsoonto bisha sadeedaad ee sanadkan oo ay ka harsan tahay inka yar shan bilood. Raila ayaa walaac ka muujiyay gudiga …
Nakuru : Labo Qof oo loo xiray Dilka Arday Dhiganayay Iskuulka Maryland
Booliska kowntiga Nakuru ayaa xiray labo qof oo lagu tuhmayo dilka arday kamid ahaa ardayda dhigata iskuulka maryland high school ee ku yaala kowntiga Nakuru. Dilkan ayaa ka dhacay xarun ganacsi oo ku taala deeganka Subukia muddo hada laga jooga Labo isbuuc. Labada tuhmane ayaa da’ahaantooda lagu qiyaasayaa in ay …
DHAGAYSI : Shisia Oo Digniin U Diray Dhalinyarada Mandera ee Baraha Bullshada Dadka Ka Kicinaya
27th February 2017	Somali Language 0
Dowlada Kenya ayaa sheegtay iney jiraan dhalinyaro baraha bulshada wax ku qora iyagoo isla markaana doonaaya iney isku dhex kiciyaan qeybaha bulshada ee kudhaqan kawntiga Mandheera Godhoomiyaha amaanka Mandheera mudane Fredrick Shisisa oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa dirau dhiniin oo uu kaga soo horjeedo dhalinyarada waxyaabaha kiciya shucuurta shacabka …
BARNAAMIJKA MADASHA : Doorka Soomaalida Kenya ee Siyaasada iyo Dhaqaalaha
26th February 2017	Somali Language 0
Barnaamijka madasha ee idaacada Keyfm ayaa todobaadkan ku eegeynaa doorka ay Soomaalida Kenya ku leedahay siyaasada iyo dhaqaalaha dalka. Barnaamijkan waxaa todobaadkan idinla socodsiinaya Sulayman Shariif Jimcaale HALKAN KA DHAGAYSO BARNAAMIJKA OO DHAMAYSTIRAN
Arday ku dhaawacantay shil ka dhacay Gilgil
25th February 2017	Somali Language 0
Arday ayaa si dirqi ah uga baxsatay shil ka dhacay wadada weyn ee isku xirta Nakuru ilaa Nairobi. Ardayda ayaa gaaraysay ilaa 23,waxaana ay dhigtaan iskuulka Murindu Secondary School ee Nakuru. Xiliga ay shilka galayeen ayay kasoo laabteen Naivasha,iyaga oo dabaal deg dhanka ciyaaraha kasoo qayb galay. Gaarigii ay la …
Ciidamo loo qorayo dhamaynta weerarada kooxaha burcada ee Mwingi
Ilaa 80 ciidamada booliska kaydka ayaa loo qorayaa in ay ka caawiyaan laamaha kale ee amaanka soo afjaritaanka weerarada kooxaha burcada ee Mwingi. Ciidamadan oo intooda badan ahaanaya dhalinyaro ayaa laga soo qorayaa bulshada deegaanka,waxaana baaritaano iyo tababaro u samaynaya gudi amaanka oo dowlada. Wasiirka arimaha gudaha Joseph Nkaissery ayaa …